ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Mon, 27 Sep 2021 11:03:47 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.7.3 https://burma.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-irr_fav-32x32.png ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com 32 32 ယူကရိန်းမှ လက်နက်အဝယ်တော် (သို့မဟုတ်) ဦးအောင်လှိုင်ဦး https://burma.irrawaddy.com/article/2021/09/27/246270.html Mon, 27 Sep 2021 11:03:47 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246270
The post ယူကရိန်းမှ လက်နက်အဝယ်တော် (သို့မဟုတ်) ဦးအောင်လှိုင်ဦး appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မင်းကင်းတွင် စစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်၍ PDF ၁၃ ဦး သေဆုံး https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/27/246266.html Mon, 27 Sep 2021 10:49:01 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246266
အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ မရှိ၊ စစ်ပညာ သင်ကြားထားခြင်း မရှိသော ဒေသခံ ပြည်သူများ သာ ဖြစ်သည့် ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ၈ ဦးနှင့် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ် PDF အဖွဲ့က သိရသည်။
The post မင်းကင်းတွင် စစ်တပ်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်၍ PDF ၁၃ ဦး သေဆုံး appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃၃ နှစ်ပြည့်ပြီ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/27/246263.html Mon, 27 Sep 2021 10:30:14 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246263
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ သက်တမ်း ၃၃ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
The post အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃၃ နှစ်ပြည့်ပြီ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နေအိမ်တွင် မနေနိုင်သော ဘဝများ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2021/09/27/246261.html Mon, 27 Sep 2021 08:58:52 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246261
ထူးခြားချက်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် သူတို့၏ မိသားစုများပါ နေအိမ်တွင် မနေနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
The post နေအိမ်တွင် မနေနိုင်သော ဘဝများ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> လေတပ်ဦးစီးချုပ် မိသားစု စီးပွားရှာသော နည်းလမ်း (အပိုင်း ၂) https://burma.irrawaddy.com/article/2021/09/27/246251.html Mon, 27 Sep 2021 05:08:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246251
၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်ကို လေတပ်အကြီးအကဲ ခန့်သည်။
The post လေတပ်ဦးစီးချုပ် မိသားစု စီးပွားရှာသော နည်းလမ်း (အပိုင်း ၂) appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အဆိုတော် အီတိုး ဖောက်ခွဲရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဟု စစ်ကောင်စီ စွပ်စွဲထား https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/26/246249.html Sun, 26 Sep 2021 12:04:38 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246249
၎င်းတို့၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ နဝဒေးလမ်း၊ အိမ်တအိမ်တွင် အဆိုတော် အီတိုးကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
The post အဆိုတော် အီတိုး ဖောက်ခွဲရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဟု စစ်ကောင်စီ စွပ်စွဲထား appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့် ချယ်ရီထက်အား ပုဒ်မ ၅၀၅- က ဖြင့် အမှုဖွင့် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/26/246247.html Sun, 26 Sep 2021 11:10:38 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246247
ဇွန်လတွင် NLD ပါတီ၏ ဘီးလင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဖြစ်သူ မသီရိရတနာနှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မသီရိရတနာမှ တောတွင်း စခန်းချ နေထိုင်မှုများနှင့် လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှု မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ၊ NUG ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ပေးပို့ခြင်း၊ ပြည်ပ သတင်းဌာနများ၏ သတင်း ရုပ်သံ ဖိုင်များကို အပြန်အလှန် ပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်တော်စောင့် ချယ်ရီထက်အား ပုဒ်မ ၅၀၅- က ဖြင့် အမှုဖွင့် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> သထုံတွင် စစ်တပ်က အမျိုးသမီးအချို့ကို ဖမ်းပြီး အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေဟုဆို https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/26/246245.html Sun, 26 Sep 2021 10:34:11 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246245
BGF အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကျော်လဲ၏ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀ ကျော်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့ အခြေစိုက် အမှတ် (၄၀၆) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇၀ ကျော်တို့ သည် ဒေသခံအမျိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီးကာ စစ်ရေး လှုပ်ရှားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း KNU တပ်မဟာ (၁) မှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
The post သထုံတွင် စစ်တပ်က အမျိုးသမီးအချို့ကို ဖမ်းပြီး အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေဟုဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ကုလညီလာခံတွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် မိန့်ခွန်းမပြော၊ အာဖဂန် ပြောမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/25/246241.html Sat, 25 Sep 2021 12:16:17 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246241
The post ကုလညီလာခံတွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် မိန့်ခွန်းမပြော၊ အာဖဂန် ပြောမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> လေတပ်ဦးစီးချုပ် မိသားစု စီးပွားရှာသော နည်းလမ်း (အပိုင်း ၁) https://burma.irrawaddy.com/article/2021/09/25/246235.html Sat, 25 Sep 2021 08:26:06 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246235
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် သူ၏မိသားစုများသည် လေတပ်ကို ပုံဖော် စီမံရာမှ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနေကြသည်။
The post လေတပ်ဦးစီးချုပ် မိသားစု စီးပွားရှာသော နည်းလမ်း (အပိုင်း ၁) appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မြောက်ဦးဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ရေး အဆိုပြုလွှာမူကြမ်း ထပ်တင် https://burma.irrawaddy.com/lifestyle/culture/2021/09/24/246227.html Fri, 24 Sep 2021 12:34:36 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246227
တောင်တွေကို တူးတယ်၊ ကျုံးတွေကို မြေဖို့တယ်။ ကျူးကျော်အိမ်တွေ ဆောက်တယ်။ ကျူးကျော်အိမ် ဆိုတာတွေကို ဘူ ဒိုဇာနဲ့ ထိုးလိုက်ရင် ရသေးတယ်။ တောင်တွေ တူးလိုက်တာတွေက ကော်နဲ့ ပြန်ကပ်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ ဖားကန့်မှာ တူးသလိုမျိုး မြောက်ဦးမှာ အခုအဲဒီလို မျိုးဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းက တောင်တတောင်ကို ဖြိုရင် ပေါက်တူးနဲ့ တူးရတာ ဆိုတော့ ၁/၂ လလောက်တော့ ကြာတယ်။ အခု မြေတူးစက်နဲ့ တူးလိုက်ရင် တမနက်နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေက အခု တော်တော် အန္တရာယ် များနေတယ်
The post မြောက်ဦးဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ရေး အဆိုပြုလွှာမူကြမ်း ထပ်တင် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> BGF ထိန်းချုပ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလှေဂိတ်များ ထိုင်းဘက်က ပြန်ဖွင့်ရန်စီစဉ် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/24/246222.html Fri, 24 Sep 2021 11:53:35 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246222
ထိုင်းနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်းပြီး နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်တွေလည်း ဒီဂိတ်တွေ ဝင်လာတော့မှာ။ နိုင်ငံတော်အတွက် အခွန် အခတွေ ရသင့်ပါလျက်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စစ်အစိုးရရဲ့ နီးစပ်သူတွေ ဂိတ်တွေ ဖွင့်ပြီး အကျိုးအမြတ် ရခဲ့ကြတာ။ နိုင်ငံတော် အခွန်မရတဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမယ့် ကဏ္ဍတွေမှာ အားနည်းကုန်တာပေါ့
The post BGF ထိန်းချုပ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလှေဂိတ်များ ထိုင်းဘက်က ပြန်ဖွင့်ရန်စီစဉ် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> စစ်ကောင်စီက ချင်းပြည်နယ်ရှိ ၈ မြို့နယ်ကို အင်တာနက် ဖြတ်တောက် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/24/246215.html Fri, 24 Sep 2021 11:20:16 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246215
အင်တာနက်ပါ မဟုတ်ဘူး။ ဖုန်းလိုင်းကလည်း မိချင်သလိုလို မမိချင်သလိုလို ဖြစ်နေတာ။ ဒီမနက်လည်း ကြားတာ ဖလမ်းမြို့နယ်အဝင်မှာ စစ်ကောင်စီဘက်က စစ်ကားတွေ အများကြီးပဲ တက်လာနေတယ်တဲ့။ ၄၊ ၅၊ ၆ စီးလောက် ရှိတယ်တဲ့။ အင်တာနက်က ဖြတ်ထားတဲ့အပြင် ချင်းတောင်က တနေရာနဲ့ တနေရာ လှမ်းတော့ ဖုန်းနဲ့ပဲ အခြေအနေ သတင်းမေးနေကြရတာ
The post စစ်ကောင်စီက ချင်းပြည်နယ်ရှိ ၈ မြို့နယ်ကို အင်တာနက် ဖြတ်တောက် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်နက်ကိုင် ရုန်းကန်မှုကို ထောက်ပံ့မှာ မဟုတ်ဘူး https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2021/09/24/246212.html Fri, 24 Sep 2021 10:04:36 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246212
စစ်တပ်ဟာ ယခုလောက် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေ သို့မဟုတ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ညီညွတ်စွာ ဆန့်ကျင်လာတဲ့ လူတွေကို တခါမှ မကြုံဖူးဘူး။
The post ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်နက်ကိုင် ရုန်းကန်မှုကို ထောက်ပံ့မှာ မဟုတ်ဘူး appeared first on ဧရာဝတီ.
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို ခုခံစစ်ဖြင့် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင် မြင်းစောင်းမကျန် တော်လှန်ရန် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကြေညာလိုက်သည်။
ထိုသို့ စစ်ကြေညာလိုက်သည့်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်ကဲ့သို့ နိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝိုင်းက ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း အသီးသီးဖော်ပြ ပြောဆိုခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် NUG အကြား သဘောထား ကွဲပြားမှုသည် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး မည်ကဲ့သို့ ရှိလာနိုင်သည်ကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ကမ္ဘာတဝှမ်း ပဋိပက္ခများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့် International Crisis Group (ICG) ၏ မြန်မာ့အရေးအကြံပေး Richard Horsey ကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါသည်။
ဘာကြောင့် NUG အနေနဲ့ အခုလို ကြေညာဖို့ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ နားလည်ကြပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံမှတော့ စစ်ပွဲကို ဦးစားပေးတာမျိုး ပြောမှာ မဟုတ်ပါ
မေး ။ ။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က စက်တင်ဘာ ၇ ရက်မှာ စစ်ကောင်စီကို စစ် ကြေညာလိုက်ပါ တယ်။ အဲဒီလို ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ NUG အကြားမှာ သဘောထား ကွဲလွဲတာတွေ ဖြစ်သွားပါသလား။ ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့ NUG ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေကို စာနာပြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို စာနာကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘာကြောင့် NUG အနေနဲ့ အခုလို ကြေညာဖို့ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ နားလည်ကြပေမယ့် ဘယ်နိုင်ငံမှတော့ စစ်ပွဲကို ဦးစားပေးတာမျိုး ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ NUG က စစ်ကောင်စီကို မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြေညာလိုက်တဲ့ အပေါ်မှာရော ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ။ စစ်ကြေညာလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့ကလည်း NUG ဟာ မြေပြင်မှာ လက်နက်တွေ ထိထိရောက် မထောက်ပံ့နိုင်ဘဲ အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တော်လှန်ရေးကို မြှင့်တင်လိုက်တယ်လို့လည်း ပြောကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှတ်ချက် ပေးချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကြေညာချက်ဟာ စစ်အစိုးရကို အကြမ်းဖက် ဆန့်ကျင်ခုခံနေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ၊ မြေအောက်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို အားပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ NUG မှာ အုပ်စုသီးသီးကို ငွေကြေးနဲ့ လက်နက်တွေ ထောက်ပံ့ဖို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စွမ်းရည်ဟာ အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှိနေပြီး သူကိုယ်တိုင်မှာလည်း စစ်ရေးစွမ်းရည် ရှိမနေပါဘူး။ ဒီအချက်တွေကြောင့် NUG ဟာ သူပြောတဲ့စကားတွေကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးမယ့် လုပ်ရပ်တွေ မရှိဘူးလို့ အချို့လူတွေကို ခံစားရစေပါတယ်။ တကယ်လို့ စစ်ကြေညာတာက တော်လှန်ရေးကို နောက်တဆင့်အထိ မမြှင့်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တာက အချို့လူတွေကို စိတ်ပျက်လာစေနိုင်ပြီး အချို့ကလည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ပိုနားလည်လာနိုင်ပါတယ်။
ICG ၏ မြန်မာ့အရေးအကြံပေး Richard Horsey (ဓာတ်ပုံ/Richard Horsey Twitter)
မေး ။ ။ NUG က စစ်ကောင်စီကို စစ်ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အာဏာသိမ်းပြီး ၈ လ ကြာလာတဲ့နောက်မှာ စစ်တပ်ဟာ သူ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားသာချက်နဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ကောင်းကောင်း နားလည်လာပါတယ်။ တပ်မတော်မှာ တန်ပြန် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရှည်ကြာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီး အဆုံးသတ်မှာ အောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပုံရပါတယ်။ သို့သော်လည်း စစ်တပ်ဟာ ယခုလောက် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အခြေအနေ သို့မဟုတ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ညီညွတ်စွာ ဆန့်ကျင်လာတဲ့ လူတွေကို တခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ တပ်မတော်ဟာ ခုခံဆန့်ကျင်မှုရဲ့ ဇွဲကို လျှော့တွက်ပြီး ရှေ့တန်းနေရာ များစွာက အချိုးမညီတဲ့ စစ်ပွဲကို ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်ကို အထင်ကြီးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ရေရှည်မှာရော NUG နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲတာတွေ ပိုဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။
ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံအများစုကတော့ ခုခံဆန့်ကျင်တဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာ စစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေတဲ့အတွက် အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ဗီဇာကိစ္စ၊ အကူအညီပေးရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ သဘောတူတာမျိုး အစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ NUG ကသာ စစ်ကောင်စီကို အနိုင်တိုက်ပြီး အဲဒီယူဆချက်တွေ မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ တရုတ်လိုမျိုး နိုင်ငံတွေ အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံတွေကလည်း NUG ကို ဦးစားပေး ဆက်ဆံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘယ်နိုင်ငံကမှတော့ လက်နက်ကိုင် ရုန်းကန်မှုကို ထောက်ပံ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ NUG နဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအကြား အဲဒီလို သဘောထား ကွဲလွဲတာတွေရှိရင် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ဘာတွေ ရှိနိုင်မလဲ။ နောက်ဆက်တွဲ ဘာတွေ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ နိုင်ငံခြားကနေ NUG ကို စစ်ရေးအင်အား ထောက်ပံ့မှု မရှိဘူးဆိုရင် စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဖြုတ်ချဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အာဏာကို လက်လျှော့ပေးဖို့ထက် တိုင်းပြည် ပျက်စီးတာကိုပဲ မြင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ အရမ်းခက်ခဲနေပေမယ့်လည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဖိအားပေးပြီး ဆွေးနွေးဖို့ ဆက်လက် တိုက်တွန်းနိုင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုဟာလည်း ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ခံစားရပြီးနောက်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကို တွန့်ဆုတ်သွားပါပြီ။ သို့သော်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးက ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက်လာ ဖို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာပါ။
အကယ်၍ နိုင်ငံခြားကနေ NUG ကို စစ်ရေးအင်အား ထောက်ပံ့မှု မရှိဘူးဆိုရင် စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဖြုတ်ချဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ နိုင်ငံတကာက အကြမ်းဖက်တာကို မထောက်ခံဘူးဆိုရင် NUG အနေနဲ့ တော်လှန်ရေးကို ဆက်လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ မကြာသေးမီက အာဖဂနစ္စတန်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်ရေးအရ ကြားဝင်ပေးမှု ခေတ်ကာလ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေကလည်း NUG ကို စစ်ရေးအရ အကူအညီ အထောက်အပံ့ အလွန်မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ အဲဒါဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ အနေနဲ့လည်း လူ အများက ထောက်ခံနေတဲ့ ခုခံတော်လှန်ရေးကို အနိုင်ရဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါလား ဆိုတာကို ရှာတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဟာ ခုခံတော်လှန်သူတွေအတွက် စစ်ကောင်စီကို အနိုင်ရဖို့ အရမ်းခက်ခဲပေမယ့်လည်း အပြောင်းအလဲကို မြင်ဖို့ သူတို့ ဘယ်လို စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသလဲ ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ စစ်အစိုးရ အနေနဲ့လည်း လူအများက ထောက်ခံနေတဲ့ ခုခံတော်လှန်ရေးကို အနိုင်ရဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါလား ဆိုတာကို ရှာတွေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
]]> စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေက ဆူးငြောင့်ခလုတ် ဖြစ်လာနေပြီလား https://burma.irrawaddy.com/news/2021/09/24/246210.html Fri, 24 Sep 2021 09:00:35 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=246210
စစ်တပ်အနေနဲ့ ဒေသတွင်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ခုခံသူတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေကို ပြန် လည်ကာ ဖိအားပေး အသုံးချလာနေတာဖြစ်ပြီး အရပ်သား အစိုးရလက်ထက် အနေအစား မချောင်ခဲ့တဲ့ ကသည်းသူပုန် အချို့ဟာလည်း စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ပြန်လည်ထောင်လွှားလာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
The post စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေက ဆူးငြောင့်ခလုတ် ဖြစ်လာနေပြီလား appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း အနောက်ဘက်ပိုင်းက တမူးမြို့လေးဟာ ကူးသန်းရောင်း ဝယ်မှုတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့ပေမယ့် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုတွေကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ခုခံရင်း စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး နယ်မြေတခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို ရရာ လက်နက်စွဲကိုင် ခုခံရာမှာ အစောဆုံး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တမူးဒေသမှာ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလို ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဒေသကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ (PDF) တွေဟာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ပျူစော ထီးလို့ ခေါ်တဲ့ အရပ်ဝတ် လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ရုံသာမ သီးခြား ပြဿနာတရပ်ကိုလည်း ရင်ဆိုင်နေရပါသေး တယ်။
နယ်စပ်ဒေသတို့ ထုံးစံအတိုင်း နယ်မြေ ဖြတ်ကျော်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ခိုလှုံပြီး အိန္ဒိယလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ခွဲထွက်ရေး မဏိပူရ် ကသည်းသူပုန်အဖွဲ့ဝင် အချို့ ဟာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဒေသခံပြည်သူ တွေ အပေါ် ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်နေတာကို ကြုံတွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ တမူးဒေသ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (TSG) က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ကသည်း (UG) တွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြည်သူတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ဖို့ တရားဝင် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန် ပြီး သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းတာကို မရပ်တန့်ဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီမလို လားတဲ့သူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်သလို တော်လှန်ရေး ပြီးဆုံးချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ခိုလှုံခွင့်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
တမူးဒေသ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (TSG) တာဝန်ရှိသူတဦးက “အာဏာသိမ်းလိုက်တော့ အမောက် ပြန်ထောင်လာတဲ့ သဘော ပေါ့။ ပြည်သူတွေကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးတာ၊ PDF တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းနေကြတာ။ ဒါကြောင့် တမူးမှာ ရှိနေတဲ့ ကသည်းUG တွေ စစ်ကောင်စီနဲ့ မပူးပေါင်းနဲ့၊ မကူညီနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံ၊ သတိပေးတာပါ” လို့ ပြောပါ တယ်။
ဒါ့ပေမယ့် ကြေညာချက်ဟာ ကသည်းလူမျိုးစု တခုလုံးအား ရည်ညွှန်းထားတာ မဟုတ်ဘဲ တမူးမြို့မှာ နေထိုင်ပြီး စစ်ကောင်စီ နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး နှောင့်ယှက်တဲ့ (UG) အဖွဲ့အချို့ကိုသာ ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့လည်း စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှာ TSG က ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေး မဏိပူရ် ကသည်းသူပုန်တွေ ဖြစ်တဲ့ PLA (People’s Liberation Army of Manipur) နဲ့ UNLF (United National Liberation Front) တို့ အပါအဝင် ကသည်းလက်နက်ကိုင် ၅ ဖွဲ့လောက်ဟာ ယခင်စစ်အစိုးရတွေ လက်ထက်ကတည်းက မြန်မာ- အိန္ဒိယ နယ်စပ်တလျှောက် မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာ ခိုလှုံရင်း အိန္ဒိယလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ကိုတွေ တိုက်ခိုက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ တမူးဒေသအပြင် ချင်းပြည်နယ်၊ တွန်းဇံမြို့နယ်နဲ့ နာဂဒေသဖြစ်တဲ့ လဟယ်၊ ခမ္မတီး၊ လေရှီး ဒေသတွေမှာလည်း လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပြီး နာဂလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ နာဂအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ် ကောင်စီ- ကပ်ပလန် (NSCN-K) အဖွဲ့ နဲ့လည်း ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိသလို ကလေးနဲ့ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွေအထိ အခြေချ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်တာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာတော့ ဒေသတွင်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ချေမှုန်းဖို့ရာမှာ ကသည်းသူပုန်တွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကို တိမ်းရှောင်လာတဲ့ သူတွေကို မောင်းထုတ်ဖို့၊ သတင်းပေးဖို့တွေအတွက် စစ်တပ်ရဲ့ဖိအားပေး အသုံးချမှုကို ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့ ဒေသတွင်း လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လလောက်ကစလို့ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းတာတွေမှာ ကသည်းသူပုန်အချို့ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင် လာတာကို မြင်တွေ့ကြရသလို မေလ ၁၁ ရက်နဲ့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်တိုက်ပွဲမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ မဏိပူရ် ကသည်း လက်နက်ကိုင် ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ တမူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယ ခွဲထွက်ရေး ကသည်းသူပုန်တွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့အခြေအနေတွေကို ဧပြီလကတည်းက အိန္ဒိယ အခြေစိုက် သတင်းစာတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး အရပ်သား ၁၂ ဦးအထိ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေး- တမူးဒေသ ဆန္ဒပြပွဲဖြိုခွင်းမှု တွေမှာ အိန္ဒိယ ခွဲထွက်ရေး လက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ မဏိပူကသည်းသူပုန် PLA နဲ့ UNLF အဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ လည်း အိန္ဒိယ ထောက်လှန်းရေး အရာရှိတွေရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအတွက် မေလအတွင်းက ကသည်းလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်အချို့နဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကြား တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ် တယ်လို့ အိန္ဒိယ သတင်းစာတွေက ဆိုခဲ့ကြပြီး ငွေကြေး အပါအဝင် ကသည်းသူပုန်တွေကို စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း အခြေချ လှုပ်ရှား နေထိုင်ခွင့် အာမခံချက် အပေးအယူတွေနဲ့ သဘောတူညီပြီးတဲ့နောက် ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေကို စစ်တပ် ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်စေကာ ခေါ်သွင်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ယင်းကာလအတွင်း တမူးဒေသကို အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဖြစ်သူ လာရောက်ခဲ့ တာရှိ တယ်လို့လည်း ဒေသခံတွေက ဧရာဝတီကို ပြောထားပါတယ်။
“ကသည်းUG တွေက တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ ပါလာတယ်၊ စစ်ကောင်စီဘက်ကနေ သူတို့ကို နေ့စားလိုမျိုး ပေးပြီး ငှားတာတွေ လည်း ရှိတယ်၊ ဒီလူတွေ တိုက်ပွဲမှာ သေသွားရင် မဏိပူရ်ဘက်က လူတွေက ကာကွယ်ရေးတွေကို အပြစ်မတင်ပါဘူး”လို့ တမူးဒေသ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောပါတယ်။
အရင်ကတော့ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေကို အိန္ဒိယအစိုးရ ဖိအားပေးမှုကြောင့် စစ်တပ်က မြန်မာမြေပေါ်ကနေ ဖယ်ရှား ခဲ့ဖူးပေမယ့်၊ စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ သူတို့ ပြန်လည် နေထိုင်ခွင့် ပြုထားတဲ့သဘောရှိကြောင်း၊ မဏိပူရ်ဘက်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေကတော့ ဒုက္ခပေးတာမျိုးမရှိပေမယ့် မြန်မာဘက်က ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကို တော့ မောင်းထုတ်တတွေ ရှိတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီဘက်က ပါဝင်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကသည်းလက်နက် ကိုင် PLA နဲ့ UNLF တို့ ပါဝင်တဲ့ အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေး လက်နက်ကိုင်တွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ညှိုနှိုင်းရေး ကော်မတီဘက်ကတော့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေ အထင်အမြင် လွဲအောင်လို့ အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ အမြဲတမ်းအသုံးပြုတဲ့ လုပ်ကြံသတင်းတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း အိန္ဒိယ အခြေစိုက် သတင်းစာတွေကို ပြောထားပါတယ်။
ကသည်းသူပုန်အဖွဲ့ဝင်တွေ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြားလာရတာနဲ့အတူ သူပုန်အဖွဲ့ဝင် လက်အောက် တပ်သားတွေဖြစ်တဲ့ ကသည်းလူငယ်တိုင်းက ဒီအပေါ် လက်ခံကျေနပ်တာ မဟုတ်ဘဲ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေသတွင်း လေ့လာသူ နာဂလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ထွန်းက ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လ ဩဂုတ် ၁၆/၁၇ ရက်ကလည်း ဒေသတွင်း PDF တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ငြင်းဆန်ကာ ထွက်ပြေးတဲ့ ကသည်းသူ ပုန် အဖွဲ့ဝင် လူငယ် ၂ ဦးမှာ ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီး အရိုးတွေကျိုးတဲ့အထိ နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ် လို့လည်း ၎င်းကဆိုပါတယ်။
“PLA (ကသည်းသူပုန်) တပ်ဖွဲ့ဝင် လူငယ်တော်တော်များများဟာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ အတူတကွ တိုက်ခိုက်တာတွေ မလုပ် ချင်ကြဘူး။ မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ PLA ကို သူတို့နဲ့ အတူ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာ ဒါမဟုတ် ဆက်ကြေးပေးတာ ဒါမှမဟုတ် အိန္ဒိယဘက်ကို ပြန်စေတာ တခုခုလုပ်ဖို့ ဖိအားတွေ အမြဲပေးပါတယ်” လို့ ၎င်းပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာ ခိုလှုံလှုပ်ရှားနေတဲ့ ကသည်းသူပုန်အဖွဲ့တွေထဲက လူငယ်တွေဟာလည်း ဖုန်းမရှိ၊ ဖျော်ဖြေရေး မရှိ၊ မိသားစုနဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိဘဲ ဖိအားများစွာအောက်မှာ အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းနဲ့ နယ်စပ်က စီးပွားရေးသမားတွေဆီမှာ ငွေညစ်ဖို့သာ အသုံးချခံဖြစ်နေရပေမယ့် မဏိပူရ်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေမှုကိုလည်း မေးခွန်းထုတ် မှု တွေ ရှိနေပါတယ်။
“PLA ကေဒါအချို့နဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာတော့ သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခပုံပြင်များစွာနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ဖိအားပေးမှု တွေက သူတို့ကို ကြောက်ရွံ့စေပုံတွေကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်” လို့လည်း ဒေသတွင်း လေ့လာသူတဦးက ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေး မဏိပူရ်ကသည်းသူပုန်တွေ ယခင် န.အ.ဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ် တလျှောက် မြန်မာဘက်ခြမ်းက နယ်မြေတွေမှာ ဝင်ရောက် လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ငွေကြေး အကျိုးစီးပွားတွေ အပေးအယူ ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုလှုံ လှုပ်ရှားနေတဲ့ အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေး ကသည်းသူပုန်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အိန္ဒိယဘက်က ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြောကြာတာတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံအတွင်း မည့်သည့် လက်နက်ကိုင်တပ်မှ အခြေချခွင့် မပြုထားဘူးလို့ ငြင်းဆို လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ အစိုးရထက်လက် အိန္ဒိယနဲ့ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ဖို့ လိုလားတဲ့အခါမှာတော့ ကသည်းသူပုန်တွေကို ဝင်ရောက်ခိုက်ခဲ့တာ ရှားရှားပါးပါးအနေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီနဲ့ မတ်လတွေအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခန္တီးဒေသထဲရှိ နာဂအမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ် ကောင်စီ (NSCN-K) ဗဟိုဌာနချုပ် တကားစခန်းမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေး ကသည်းသူပုန် PLA နဲ့ UNLF တပ်ဖွဲ့ကိုတွေ ကို စစ်တပ်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း တိုက်ခိုက်မှုမှာ ဖမ်းမိတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းသူပုန်အဖွဲ့ဝင် ၂၂ ဦးနဲ့ ခိုအောင်းခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ NSCN-K ခေါင်း ဆောင် ၅ ဦးကို အပြစ်ပေးခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သမ္မတ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ကသည်း သူပုန်တွေကိုတော့ အိန္ဒိယ အစိုးရထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံ NLD အစိုးရကို ဖြုတ်ချကာ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စစ်တပ်အနေနဲ့ ဒေသတွင်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ခုခံသူတွေကို နှိမ်နင်းဖို့ ကသည်းလက်နက်ကိုင်တွေကို ပြန်လည်ကာ ဖိအားပေး အသုံးချလာနေတာဖြစ်ပြီး အရပ်သား အစိုးရ လက်ထက် အနေအစား မချောင်ခဲ့တဲ့ ကသည်းသူပုန်အချို့ဟာလည်း စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး ပြန်လည်ထောင်လွှားလာ ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
လတ်တလော တမူးဒေသမှာ ခုခံတိုက်ပွဲတွေ အတန်ငယ် ငြိမ်သက်နေပေမယ့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ ရှိနေပြီး စတင် ခုခံတဲ့အချိန်ကစလို့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်း ရှိပြီး စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ ဝင် ၁၀၀နီးပါး ကျဆုံးအောင် တိုက်နိုင်လို့ တမူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
ဒေသ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ တမူးဒေသအတွင်း တပ်ရင်း ၁၊ ၂၊ ၃ အနေနဲ့ စုဖွဲ့လှုပ်ရှားနေသလို စစ်ကောင်စီဘက် ကလည်း အင်အားတိုးချဲ့ကာ လက်နက်ကြီး အချို့ မြို့တွင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့အပြင် ပျူစောထီးနဲ့ ကသည်းသူပုန် အချို့ ကို လက်နက်တပ်ဆင် လေ့ကျင့်ပေးနေတာတွေ ရှိတာကြောင့် အရပ်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ မပူးပေါင်းကြ ဖို့ သတိပေးထားပြီး ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်လာပါက မည်သူကိုမဆို တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ် လို့လည်း သတိပေးစာတွေ ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။
“ဒီဒေသမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကသည်းအဖွဲ့ တဖွဲ့ ရှိတယ်။ သူတို့က စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ပြည်သူတွေကို တိုက်ခိုက် တယ်။ ဆက်ကြေး တောင်းတာတွေ လုပ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မနှောင့်ယှက်ဖို့ ပေါ့။ မေတ္တာရပ်ခံ သတိပေးတာပါ၊ အဓိက ဒါပါပဲ” လို့ TSG တာဝန်ရှိသူတဦးက သတိပေးစကား ဆိုလိုက်ပါတယ်။